Depiote manohana kandidà : Tsy nahaloa ny volan’ireo mpanao ny fampielezan-keviny -
AccueilSongandinaDepiote manohana kandidà : Tsy nahaloa ny volan’ireo mpanao ny fampielezan-keviny
Depiote manohana kandidà : Tsy nahaloa ny volan’ireo mpanao ny fampielezan-keviny
Tena ara-bakiteny ilay hira hoe “alefao ny propangandy hikaraman’ny bandy”, amin’ izao fotoanan’ny fampielezan-kevitra izao. Sao ny rehetra mieritreritra tokoa fa mandeha ho azy ny fanarahan’ny olona ireny kandidà manatanteraka fampielezan-kevitra ireny, na koa amin’ ny fon’izy ireo no hanaovany izany. Tena karama ara-bakiteny izy ireny ho an’ny sasany, araka ny voalazan’io hira etsy ambony io. Efa nifanarahana dieny ampiandohana ny karama homena ireo mpampitombo isa amin’ny fampielezan-kevitra ireny, ary aorian’ny hetsika tanterahina dia raisina avy hatrany ny vola. Raha ny fanadihadiana natao, dia efa tafakatra hatrany amin’ ny roa alina, ka hatramin’ ny efatra alina Ariary ny fanarahana kandidà amin’ izao. Tsy voatery hoe hanaraka kandidà ihany anefa, fa mety hoe manaraka ny mpanohana sy mpiray antoko aminy, izay manao fampielezan-kevitra ho an’ilay kandidà. Izany hoe raha atao ny kajikajy tsotsotra dia mahatratra roa Tapitrisa ny vola avoaka, raha toa misy olona zato manaraka anatin’ iray andro. Anatin’ ny herinandro izany dia efa ho 14 Tapitrisa, satria isan’andro ny fampielezan-kevitra atao.
Matetika ny vola ampiasaina amin’ireny hetsika ireny, dia efa omen’ny kandidà ilay mpiray antoko hanatanteraka hetsika fampielezan-kevitra ho azy. Saingy matetika dia efa zatra mihinam-bola sy efa zatra mitsentsitra ilay manodidina ilay kandidà, ka ny vola karaman’ireo mpanao fampielezan-keviny no haniny. Vokany dia tsy hanaiky mora foana ireo mpikarama, ary hitaky hatramin’ny farany ny volany. Tahaka izany ilay zava-nitranga tetsy amin’ny tranona solombavambahoaka iray lany tao amin’ny boriborintany fahadimy. Raha ny zava-nisy, dia nitroatra ireo mpanao propangady noho ny tsy fahazoan’izy ireo ny karamany, ka saika ratsy ny fiafarana. Niolomay ary may ny endim-boanjon’ingahy depiote, ka tonga hatramin’ ny fiantsoana mpitandro filaminana hiaro azy. Amin’ ny fampielezan-kevitra tahaka izao, dia tsy tokony hieritreritra ny Malagasy ho bado ireo nanankinana ny hetsika fampielezan-kevitr’ireo kandidà, sy ny mpizara ny vola. Mazava tsinona ny an’ireo mpikarama ireo, hanina androany tadiavina androany, ary rahampitso tadiavina ny ampitso.